Izithelo Zijusi Machine Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Izithelo Ijusi Machine Machine
Umshini wesiphuzo se-Carbonated kanye nesiphuzo se-soda sisho isiphuzo esigcwele isikhutha ngaphansi kwezimo ezithile.
ukugeleza komshini ohlanzekile wamanzi ahlanzekile: amanzi amnyama → ithangi lamanzi aluhlaza → i-booster pump → isihlungi se-quartz sand → i-activated carbon filter → i-softener → isihlungi sokunemba → i-reverse osmosis → i-ozone sterilizer → ithangi lamanzi elihlanzekile → ipompo lamanzi elihlanzekile → ukuwashwa kwamabhodlela, ukugcwaliswa kanye nokubekwa ulayini wokugcwalisa → uhambisa → isibani
Inqubo eyinhloko yomshini wokudla okusemathinini nomugqa wokukhiqiza: Ukukhethwa kwempahla eluhlaza | Ukwelashwa kwangaphambi kokuhlinzwa → Ukuwafaka emathangeni → Ukuvala uphawu lokuvala umoya → Ukuvala inzalo nokupholisa → Ukuhlolwa kwe-Insulation → Ukugcinwa kwephakheji
Izithelo nemifino ukomisa nokupakisha umugqa wonke izinto zokusetshenziswa: izithelo ezintsha namaveji, njengotamatisi, upelepele, u-anyanisi, umango, uphayinaphu, amagwava, ubhanana,
I-yogurt uhlobo lwesiphuzo sobisi olunambitheka omnandi nomuncu. Luhlobo lomkhiqizo wobisi othatha ubisi njengezinto ezingavuthiwe, ezinamathiselwe bese zengezwa ngamagciwane azuzisayo (ukuqala) obisini.
Isiphuzo sejusi yezithelo uhlobo lwesiphuzo esenziwe ngezithelo ezintsha. Ijusi lezithelo ezahlukahlukene liqukethe amavithamini ahlukile nezinye izakhi zomzimba, futhi lithathwa njengesiphuzo esinempilo. Kodwa-ke, ukungabi bikho kwayo yonke ifayibha noshukela omningi wezithelo kwesinye isikhathi kuthathwa njengokubi kwayo.